နာဂစ်အပြီး ခရီးသွား မှတ်တမ်း (၃) | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
နာဂစ်အပြီး ခရီးသွား မှတ်တမ်း (၃)	Posted by mm thinker on June 7, 2008
Posted in: Experience, Nargis.	Tagged: Experience, Nargis.	နာဂစ်အပြီး ခရီးသွား မှတ်တမ်း (၃)မြင်ယောင်ကြည့်ဖို့ ပုံနှိပ်မြေပုံ
ရုံးတစ်ခုမှာ လူတစ်ရပ်မက ကြီးမားတဲ့ ပုံနှိပ်မြေပုံကြီးကနေ ကူးယူလာတာပါ။နာဂစ် ဆိုင်ကလုန်းဒဏ်ခံဒေသတွေကို မြင်ယောင်ကြည့်နိုင်ဖို့ပါ။အင်တာနက်ပေါ်မှာ မြေပုံတွေ အလျှံပယ်ရနိုင်တာ မှန်ပေမယ့် မြန်မာလို အသေးစိတ်ရေးထားတဲ့ မြေပုံကို သဘောကျမိလို့ပါ။
← ရန်ကုန်လည်ပြန်	သက္ကယ်သောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ အသေအပျောက်စာရင်း →	Pages	about